Mitemo & Maitiro | Yakavanzika-Magweta Limited / Makambani Inc.
﻿WEBSITE TERMS NEZVINOGONESESA
Aya mazwi nemamiriro ezvinhu anotonga kushandiswa kwako kwewebsite iyi; kuburikidza uchishandisa webhusaiti ino, unogamuchira aya mazwi nemitemo yakazara. Kana iwe usingabvumirani nemitemo nemitemo kana chero chikamu chemashoko aya nemamiriro ezvinhu, haufaniri kushandisa webhusaiti ino.
Iwe unofanirwa kuve uine angangoita 18 makore ekuzvarwa kuti ushandise ino webhusaiti. Nekushandisa ino webhusaiti uye nekubvumirana kune aya mazwi uye mamiriro iwe warandi uye unomiririra kuti une makore angangoita gumi nemasere ekuberekwa.
Iyi webhusaiti inoshandisa makuki. Nekushandisa ino webhusaiti uye uchibvumirana kune aya mamiriro uye mamiriro, iwe unobvuma kune yedu kambani kushandisa makuki zvinoenderana nemitemo yeiyo Magweta Anogumira zvakavanzika mutemo / makuki mutemo.
Rezinesi rekushandisa Webhusaiti
Kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira, Lawyers Limited (mubatanidzwa weNevada) uye / kana marezinesi ayo anoshandisa iyo Makambani Incorporate brand uye ane kodzero kune kodzero dzepfuma muwebhusaiti uye zvinhu zviri pawebhusaiti. Zvichienderana nerezinesi pazasi, kodzero dzese dzepfuma dzakachengetedzwa.
Unogona kuona, kurodha pasi kuitira caching zvinangwa chete, uye purinda mapeji kana zvimwe zvirimo kubva pawebhusaiti kuti uzoshandisa wega, zvichiteerana nezvirambidzo zvakatemerwa pazasi uye kumwe kunhu mune aya mamiriro uye mamiriro.
Iwe haufanire republish zvinhu kubva ino webhusaiti (kusanganisira republication pane imwe webhusaiti); kutengesa, rent kana sub-rezenisi zvinhu kubva pawebhusaiti; ratidza chero chinhu chinobva pawebhusaiti pachena; kubereka zvakare, kutevedzera, kuteedzera kana neimwe nzira kushandisa zvinhu zviri pawebhusaiti nekuda kwekushambadzira; kugadzirisa kana neimwe nzira kugadzirisa chero chinhu pane webhusaiti; kana kugovera patsva zvinhu kubva pawebhusaiti kunze kwekunge zvirimo, kana zviripo, zvakanangwa uye zvakajeka kuti zviwanikwe zvekugovera patsva.
Kana zvirimo zvikaitwa kuti zviwanikwe patsva, zvinogona kupihwa chete nemvumo yakanyorwa kubva kumukuru weLawyers Limited mubatanidzwa weNevada.
Iwe haufaniri kushandisa iyi webhusaiti nenzira ipi zvayo inokonzera, kana inogona kukonzera, kukuvadza kwewebsite kana kuora mwoyo kwekuwanikwa kana kuwanika kwewebsite; kana chero nzira ipi zvisiri pamutemo, zvisiri pamutemo, kunyengera kana kuti zvinokuvadza, kana maererano nezvimwe zvipi zvisiri pamutemo, zvisiri pamutemo, zvinonyengera kana zvinokuvadza kana basa.
Iwe haufaniri kushandisa iyi webhusaiti kuti ikopike, kuchengeta, kushandira, kutumira, kutumira, kushandisa, kuparadzira kana kuparadzira chero zvinhu zvinosanganisira (kana zvakabatanidzwa kune) chero spyware, kombiyuta yekombiyuta, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit kana imwe malicious computer software.
Iwe haufanire kuitisa chero zvakarongeka kana otomatiki kuunganidza dhata zviitiko (kusanganisira pasina muganho wekutsvaira, kuchera data, kuburitsa dhata uye kukohwa dhata) pane kana zvine hukama newebhusaiti iyi pasina mvumo yakanyorwa yeLawyers Limited.
Iwe haufaniri kushandisa iyi webhusaiti kuti utumire kana kutumira kusatumirwa kwekutengeserana kwekutengeserana.
Iwe haufanire kushandisa ino webhusaiti kune chero zvinangwa zvine chekuita nekushambadzira pasina mvumo yakanyorwa yakanyorwa yeLawyers Limited.
Kusvika kune dzimwe nzvimbo dzewebsite ino kunorambidzwa. Magweta Anochengeterwa kodzero yekudzivirira kupinda kune dzimwe nzvimbo dzewebsite ino, kana zvirokwazvo iyi webhusaiti yese, pamaonero eLawyers Limited.
Kana Lawyers Limited ikakupa iwe mushandisi ID nephasiwedi kukugonesa kuwana nzvimbo dzakarambidzwa dzewebsite ino kana zvimwe zvemukati kana masevhisi, unofanirwa kuona kuti iro ID rekushandisa nephasiwedi zvinochengetwa zvakavanzika.
Lawyers Limited inogona kudzima yako mushandisi ID nephasiwedi mukuziva kweLawyers Limited pasina ziviso kana tsananguro.
Mune aya mazwi nemamiriro ezvinhu, "zvishandiso zvako" zvinoreva zvinhu (kusanganisira pasina mumiririri, mifananidzo, mavara, mashoko evhidhiyo uye zvinyorwa zvinotaridzirwa) zvaunoisa kune ino webhusaiti, chero chinangwa.
Iwe unopa kuMagweta Limited renyika yose, risingachinjiki, risingasarudzwe, rezinesi-isina rezenisi rekushandisa, kubereka, kugadzirisa, kushambadza, kushandura nekuparadzira zvemukati zvemushandisi mune chero midhiya iripo kana yemberi. Iwe zvakare unopa kune maLawyers Limited kodzero yekupa-rezinesi kodzero idzi, uye kodzero yekuunza chiito chekutyora kodzero idzi.
Zvemukati mevashandisi hazvifanire kunge zvisiri pamutemo kana zvisiri pamutemo, hazvifanirwe kukanganisa kodzero dzepamutemo dzevatatu, uye havafanirwe kuve vanokwanisa kutora danho repamutemo kungave kupokana newe kana maLawyers Limited kana wechitatu bato (mune yega kesi pasi pemutemo unoshanda).
Iwe haufaniri kuisa chero mufananidzo wevashandisi kune webhusaiti iyo kana kuti yakambove yakatongwa pane chero ipi zvayo yakatyisidzirwa kana yakarurama yemitemo kana zvimwe zvakashata zvakafanana.
Magweta Anochengeterwa kodzero yekugadzirisa kana kubvisa chero chinhu chakatumirwa kune ino webhusaiti, kana kuchengetwa pamaseva eLawyers Limited, kana kuitirwa kana kuburitswa pane ino webhusaiti.
Zvisinei nekodzero dzeLawyers Limited pasi pemitemo nemirau iyi zvine chekuita nemashandisirwo evashandisi, Lawyers Limited haina chivimbo chekutarisa kuendeswa kwezvakadaro kune, kana kuburitswa kwezvakadai pane, ino webhusaiti.
Iyi webhusaiti inopihwa "sezvazviri" pasina chero chinomiririrwa kana waranti, kuratidza kana kurevesa. Lawyers Limited haina mamiririri kana warandi maererano newebhusaiti ino kana ruzivo uye zvinhu zvinopihwa pane ino webhusaiti.
Pasina kufungira kwakawanda kwendima yambotaurwa, Lawyers Limited haina mvumo yekuti webhusaiti ino igare ichiwanikwa, kana kuwanikwa zvachose; kana ruzivo ruri pane ino webhusaiti rwakakwana, nderechokwadi, rwakarurama kana kusarasika.
Hapana chero chinhu pane ino webhusaiti chinoumba, kana chakaitirwa kuumba, kuraira chero mhando. Kana iwe uchida kurairirwa zvine chekuita nechero zvemutemo, mutero, zvemari kana zvekurapa nyaya unofanirwa kubvunza nyanzvi yakakodzera.
Magweta limited haazovi nemhosva kwauri (kungave kuri pasi pemutemo wekutaurirana, mutemo wematuru kana zvimwewo) zvine chekuita nezviri mukati, kana kushandiswa kwe, kana neimwe nzira inoenderana neiyi webhusaiti:
kusvika padanho rekuti webhusaiti iri kana isinga kupihwe mahara-ebhadhariro, kune chero kurasikirwa kwakananga;
chero chero ipi zvayo isina kukanganisa, yakakosha kana yakakosha; kana
kune chero kurasikirwa kwebhizimisi, kurasikirwa kwemari, mari, purogiramu kana kuchengetedzwa kwakatarwa, kurasika kwezvibvumirano kana ukama hwebhizimisi, kurasikirwa kwezita kana kukodzera, kana kurasikirwa kana uori hwemashoko kana deta.
Iyi miganho yechikwereti inoshanda kunyangwe kana Lawyers Limited yakaudzwa zvakajeka nezve inogona kurasikirwa.
Hapana chero chinhu mune ino webhusaiti disclaimer chingabvisa kana kudzikisira chero garandi inorehwa nemutemo izvo zvaizove zvisiri pamutemo kuisa kana kudzora; uye hapana chinhu mune ino webhusaiti disclaimer ichabvisa kana kudzikisira mutoro weLawyers Limited maererano nechero ipi:
kufa kana kukuvara pachako kunokonzerwa nekuregeredza kweLawyers Limited; kubiridzira kana kumirira zvisirizvo pachikamu cheLawyers Limited; kana nyaya zvingave zvisiri pamutemo kana zvisiri pamutemo kuti Lawyers Limited isabvisa kana kuisa muganho, kana kuyedza kana kufunga kusabvisa kana kudzikisira, mutoro wayo.
Nekushandisa iyi webhusaiti, unobvumirana kuti kusarongeka uye zvausingakwanisi kuita zvakatemwa mune ino webhusaiti disclaimer zvine musoro.
Kana iwe usingafungi kuti ivo vane musoro, haufanirwe kushandisa iyi webhusaiti.
Iwe unobvuma izvo, sechiremera chinodzikisira chinzvimbo, Lawyers Limited, mubatanidzwa weNevada, ine kufarira kudzikisira iyo yega mutoro wevakuru nevashandi. Unobvuma kuti hausi kuzounza chero chikumbiro pachako pamusoro pevakuru veLawyers Limited, madhairekita kana vashandi maererano nekumwe kurasikirwa kwaunosangana nako maererano newebsite.
Pasina kufungira ndima yambotaurwa, unobvuma kuti kukwana kwezvibvumirano nemhosva zvakatarwa muwebhusaiti inozvidzivirira zvinodzivirira maofficial maLawyers Limited, vashandi, vamiririri, makambani, vatsivi, vanopa uye vashoma-makondirakiti pamwe neLawyers Limited
Kana kupihwa kupi kwewebhu webhusaiti uku, kana kuwanikwa kuri, kusingasimbisike pasi pemutemo unoshanda, izvo hazvizokanganisa kusimbiswa kwehumwe humbowo hwewebusayiti yekuzvidza.
Iwe unoregeredza maLawyers Limited uye unoita kuchengetedza Magweta Limited kudzoreredzwa kune chero kurasikirwa, kukuvara, mari, zvikwereti uye mari (kusanganisira pasina muganho mari yemutemo uye chero mari yakabhadharwa neLawyers Limited kune wechitatu mukugadzirisa chikumbiro kana gakava pazano yevanachipangamazano veLawyers Limited) vanopinda kana kutambura neLawyers Limited zvichikonzerwa nekutyora kupi zvako newe chero kupihwa kwemitemo nemirau iyi, kana zvichikonzerwa nechikumbiro chipi zvacho chekuti watyora chero kupihwa kwemitemo iyi nemamiriro.
Kuputsa kweiyi Mitemo uye Mamiriro
Pasina kusarura kune dzimwe kodzero dzeLawyers Limited pasi pemitemo nemitemo iyi, kana iwe ukatyora mitemo nemitemo iyi nenzira ipi zvayo, Lawyers Limited inogona kutora matanho akadai seLawyers Limited inofunga zvakakodzera kugadzirisa kukanganisa, kusanganisira kumisa kupinda kwako pawebsite, kurambidza iwe kubva pakuwana webhusaiti, kuvharira makomputa uchishandisa IP kero kubva pakuwana webhusaiti, kubata webhusaiti yako webhusaiti kukumbira kuti vadzivise kupinda kwako kuwebsite uye / kana kuunza matare edzimhosva kuzokupomera.
Magweta limited anogona kugadzirisa aya mazwi uye mamiriro kubva nguva-kusvika-nguva. Mitemo nemitemo yakadzokororwa ichashanda pakushandiswa kwewebhusaiti kubva pazuva rekuburitswa kwemitemo nemamiriro pane ino webhusaiti. Ndokumbira utarise peji rino nguva nenguva kuti uone kuti unoziva nezve yazvino vhezheni.
Lawyers Limited inogona kuendesa, sub-contract kana neimwe nzira kubata nekodzero dzeLawyers Limited uye / kana zvisungo pasi pemitemo nemitemo iyi pasina kukuzivisa iwe kana kuwana mvumo yako.
Iwe haugoni kutumira, kambani-bvumirano kana kuti zvimwe zvibvumirane nekodzero dzako uye / kana zvikwereti pasi pemirairo nemitemo.
Kana gadziriso yematemu aya nemamiriro akatarwa nedare ripi zvaro kana rimwewo masimba anokwanisa kuve asiri pamutemo uye / kana risingasimbisike, zvimwe zvirongwa zvicharamba zvichishanda. Kana chero zvisiri pamutemo uye / kana isingawedzerwe gadziriso zvingave zviri pamutemo kana kusimbisirwa kana chikamu chazvo chakabviswa, chikamu ichocho chinenge chinonzi chakabviswa, uye zvimwe zvese zvinopihwa zvicharamba zvichishanda.
Aya mazwi uye mamiriro ezvinhu anoumba chibvumirano chose pakati pako neLawyers Limited maererano nekushandisa kwako webhusaiti ino, uye inotsiva zvibvumirano zvese zvekare maererano nekushandisa kwako webhusaiti ino.
Aya mazwi nemamiriro ezvinhu anozotongwa pamwe nekufungidzirwa zvinoenderana nemitemo yeFlorida, uye chero makakatanwa ane chekuita nemitemo iyi achange ari pasi pesimba rematare aripakati peBroward County, Florida.
Kunyoresa uye Mvumo
Magweta eLawyers Limited
Zita rizere reLawyers Limited ndiLawyers Limited.
Lawyers Limited yakanyoreswa muNevada.
Kero yakanyoreswa yeLawyers Limited ndeye 701 S Carson St., Ste. 200, Carson Guta, NV 89701
Kero yaro yekutumira ndeye 23638 Lyons Ave. # 223, Santa Clarita, CA 91321.
Unogona kubata Lawyers Limited neemail kune info@companiesinc.com.